Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia namporisika an'i UK sy Kanada hanitsy ny politikam-pitsaboana COVID
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika dia namporisika an'i UK sy Kanada hanitsy ny politikam-pitsaboana COVID
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Edmund Bartlett, dia nangataka tamin'ny UK sy Canada mba hanitsy ny habeny farany mifanaraka amin'ny politika COVID rehetra. Nanazava ny antony maha-samihafa an'i Jamaika amin'ny maha firenena miankina amin'ny fizahantany azy ary mendrika kokoa.
Ny Hon. Ny minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett dia nilaza tao amin'ny op-ed ho an'ny eTurboNews:
Marihiko am-piahiana mazava tsara ny fepetra takiana amin'ny fitsapana COVID vaovao izay vao natolotry ny governemanta Canada sy UK. Ny protokolota vaovao dia mitaky ny olon-drehetra, na ny olom-pirenena, na ny mpitsidika, na miditra amin'ny firenena roa tonta amin'ny alàlan'ny rivotra, mba haneho valin'ny fitsapana ratsy mba hanamorana ny fidirana na hisorohana ny famoizan-tena. Na dia azoko tsara aza ny filàna sy ny andraikitry ny governemanta rehetra mba hiarovana ny olom-pireneny mandritra io krizy ara-pahasalamana manerantany io, ny fomba tsy manavakavaka izay ampiharana ny fepetra vaovao dia tsy isalasalana fa hamerina ny fanarenana ireo toerana kely marefo manerantany, indrindra ireo izay nanao ezaka be mba hanamafisana tsara ny fari-pahasalamany sy ny fiarovana azy ireo mba hisorohana ireo mpizahatany amin'ny loza mety hitranga amin'ny covid-19.
Taorian'ny taona nahory tsy mampiavaka ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany any Karaiba, ny fanantenana rehetra ho an'ny fiakarana an-tampony nandritra ny vanim-potoanan'ny fizahan-tany ririnina nandrasana dia nosintomina tamin'ny valiny farany nataon'ny tsena roa lehibe avy amin'ny faritra roa. ho an'ny faritra. Miaraka amin'i Etazonia, Canada ary UK dia mahatratra hatramin'ny 70 isan-jaton'ny fahatongavan'ireo mpizahatany rehetra any Karaiba.
Ireo fepetra vaovao dia tonga tamin'ny vanim-potoana nampidi-doza tamin'ny Novambra ho an'ny dia sy fizahan-tany. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka dia nanamarika fa ny fameperana mafy ny fivezivezena sy ny fepetra momba ny quarantine dia nahatonga ny fangatahan'ny dia an'habakabaka hiadana ary nijanona tamin'ny volana novambra niaraka tamin'ny fangatahan'ny mpandeha iraisampirenena ho an'ny volana novambra ho 88.3% ambanin'ny volana novambra 2019 ary somary ratsy kokoa noho ny 87.6% taona -ny fihenan'ny taona voarakitra tamin'ny volana oktobra. Ny fameperana vaovao apetrak'i Canada sy UK dia azo antoka fa hampisy fahasosorana, tsy fahazoana aina ary birao izay tsy mahasarika olona tsy hanao dia lavitra any amin'ny fireneny. Mandritra izany fotoana izany dia manasazy tsy ara-drariny ihany koa ireo toeran-kaleha izay nanao izay rehetra azony natao izy ireo mba hiarovana ny mpizahatany iraisam-pirenena.
Ho fanampin'izany, ny fepetra takiana amin'ny fitsapana COVID 19 vaovao dia midika fa ny manampahefana ara-pahasalamana amin'ireo firenena miankina amin'ny fizahan-tany dia mitaky fitadiavana loharanom-bola hizahana olom-pirenena sy mpitsidika an-jatony isan'andro. Mampanantena ny hanampy enta-mavesatra hafa amin'ny vanim-potoana efa tena sarotra mampiavaka ny fampitomboana ny fandaniam-bolam-panjakana ao anatin'ny fihenan'ny fidiram-bola
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana, ireo tompon'andraikitra misahana ny fizahan-tany ao Jamaika dia namaly tamim-pahavitrihana mba hanaraka ny fomba vaovao. Hatramin'ny volana martsa dia nirotsaka an-tsehatra ireo mpiray antoka sy mpiara-miombon'antoka aminay, ao anatin'izany ny masoivohon'ny fizahan-tany, ny zotra fitsangantsanganana, ny hotely, ny maso ivoho famandrihana, ny masoivohon'ny marketing, ny zotram-pitaterana sns sns WTO, CTO CHTA sns mba handrindrana ny valiny amin'ny krizy.
Namolavola ireo fotodrafitrasa takiana izahay, nanohana ny Minisiteran'ny Fahasalamana, ary nampianatra ny mpandray anjara rehetra momba ny virus COVID-19. Izahay dia niasa tamin'ny famolavolana ireo pejy 88 miaro ny fahasalamana sy fiarovana COVID-19 izay notohanan'ny World Travel and Tourism Council ho toy ny mpitarika ny fizahantany COVID-19 fitantanana ary nanampy tamin'ny fanavahana an'i Jamaika ho anisan'ny COVID-19 indrindra. toerana maharitra eto amin'izao tontolo izao. Ny protokolota dia mandrakotra ny faritra rehetra amin'ny indostrian'ny fizahantany, ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina; Seranan-tsambo fitsangantsanganana; Fandraisana Manintona; Mpikirakira fitaterana fizahan-tany; Mpivarotra asa-tanana; Mpandraharaha fanatanjahantena anaty rano; Fiarovana ankapobeny sy fiarovana ny daholobe; ary Mega Events. Ny Protocols momba ny fahasalamana sy fiarovana an'ny COVID-19 dia notohanan'ny World Travel and Tourism Council (WTTC).
Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely dia nampiditra protokol hanalefahana ny fiparitahan'ny COVID-19, ao anatin'izany ny fitomboana ny halaviran-toerana, ny fanaovana sarontava amin'ny toerana ampahibemaso, ny fanesorana ireo entana iombonantsika na ny tena, ny fametrahana ireo tobin-tanana fanasana tanana / fanadiovana, fanadiovana hita maso matetika, ary raharaham-barotra mifandraika amin'ny fifandraisana / teknolojia bebe kokoa. Nanangana singa manokana antsoina hoe Vondron-tsambo fitantanana risika ihany koa izahay hanaraha-maso ny fampiharana ny fepetra valinteny COVID-19 any amin'ny trano fizahan-tany manerana ny nosy.
Tamin'ny volana Jona, nandefa ny foto-kevitry ny COVID-Resilient Corridors izahay mba hanamafisana ny fahafahan'ny firenena mitantana sy mamantatra ny hetsika sy ny hetsiky ny mpizahatany manamorona ny lalantsara voafehin'ny nosy. Ny Resilient Corridors, izay mahatafiditra ny ankamaroan'ny faritra fizahan-tany amin'ny nosy, dia manome ny fahafahan'ny mpitsidika mankafy bebe kokoa ny tolotra tokana ateraky ny firenena, satria maro ny zava-mahaliana coronavirus (COVID-19), izay miorina manamorona ny Corridors, no mahazo alalana hitsidihan'ny ny manampahefana misahana ny fahasalamana. Rehefa tonga ao Jamaika ireo mpizahatany dia tsy afaka mitsidika afa-tsy ireo toerana nankatoavina ao anaty lalantsara izy ireo. Vokatry ny fahavitrihanay sy ny fiambenanay amin'ny fitantanana risika COVID-19 ny firenena, hatramin'izao, dia mbola tsy nanoratra tranga iray na aretina COVID-19 mifandraika amin'ny mpizahatany iraisam-pirenena izay nanao vakansy tany amin'ny hotely rehetra ao amin'ny firenena.
Nandritra io fotoan-tsarotra tsy nampoizina io, dia voaporofo i Jamaica fa toerana azo antoka sy azo antoka ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ary hanohy hanara-maso sy hanatsara ny fenitra ara-pahasalamana sy fiarovana izahay hiarovana ny mpizahatany tsirairay izay miantsona amoron-tsika.
Niangavy ny governemanta Canada sy UK noho izany izahay mba handinika ny famerenana ny habe farany azon'izy ireo mifanaraka amin'ny politika COVID fa kosa tokony hodinihintsika ny toe-javatra manokana sy ny haavon'ny risika mifandraika amin'ny dia any amin'ny firenena tsirairay.
Ny fandinihana lalina ity sosokevitra ity dia hanome ny fanarenana ny fizahan-tany ny fanombohana izay ilain'io sehatra io. Miankina amin'izany ny asa fivelomana ara-toekarena an-tapitrisany.